यसकारण झस्के प्रधानमन्त्री देउवा ? : RajdhaniDaily.com
Homeअर्थयसकारण झस्के प्रधानमन्त्री देउवा ?
– महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस
– ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजुु
यसैबीच महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औं प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । गत असार ३१ भित्रमा राष्ट्रपतिलाई बुुझाउनुपर्ने भए पनि अघिल्लो प्रतिवेदन नै सदनमा पेस नभएकाले र कोरोना महामारीका कारण ढिला भइरहेको सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । साउनभित्र नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तयारीका साथ आफूहरूले काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ५८औं प्रतिवेदनमा कुल बेरुजुु पौने ८ खर्ब पुुग्ने पूर्वानुुमान रहेको छ ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन
अब निक्षेपको ब्याज परिवर्तन गर्दा ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभर ग्राहकबाट कर्जा असुली गर्दा पेनाल्टी वा अतिरिक्त कुनै शुल्क...